Dog Breed 101: သေးသေးလေး Labradoodle ဆိုတာဘာလဲ။ - Breeds
Dog Breed 101: သေးသေးလေး Labradoodle ဆိုတာဘာလဲ။
Mini ဟုလည်းခေါ်သည် Labradordoodle , ။ , Labradorpoo , Labbidoo သို့မဟုတ် ဆေးရုံ , သေးငယ်သော Labrador Retriever & Poodle ရောနှောခြင်း အကောင်းဆုံးမိသားစုအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ကတစ် ဦး ပါပဲ ငရုတ်သီး မသာကြောင်းပေါင်းစပ် အသိဉာဏ် ဒါပေမယ့်လည်းအလွန် ချစ်တယ် ။ သူတို့ဟာအစစ်အမှန်ဖြစ်ဖို့နီးပါးအရမ်းချစ်စရာပါပဲ!
ဒီစပ်သည်အခြား Doodles နှင့်မည်သို့ထူးခြားသည်ကိုသင်သိလိုပါက Mini Labradoodles ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်လေ့လာရန်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူနေပါ။
သေးသေးလေး Labradoodle ၏မူလအစ
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစရိုက်များ - သေးငယ်သော Labradoodle သည်မည်သို့သောပုံနှင့်တူသနည်း။
အဆိုပါ Mini ကို Labradoodle ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကဘာလဲ?
Mini Labradoodles ကိုဘယ်လိုကြည့်ရမလဲ။
ကျန်းမာရေးနှင့်ဘဝသက်တမ်း Mini Mini Labradoodles
၀ ယ်ယူခြင်း - သေးငယ်သော Labradoodle ခွေးကလေးသည်မည်မျှကုန်ကျမည်နည်း။
သော်လည်း ပထမ ဦး ဆုံး Doodle ၏ဖန်တီးသူပြောပြီ သူကဒီဇိုင်နာဝတ်ရည်နှင့်အတူဒုက္ခတွေ့သောအရာကိုအကြောင်းကို, သူတို့ကအကောင်းဆုံးရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ The စံ Labradoodle ဟုတ်တယ် တစ် hypoallergenic ဝန်ဆောင်မှုခွေးဖြစ်ရပ်ကြီး , ဒီနေ့အထိခွေးချစ်သူများအားဖြင့်အလွန်တန်ဖိုးထားသော။
ထိုအချိန်မှစ၍ Labrador-Poodle လက်ဝါးကပ်တိုင်သည် ပို၍ လူကြိုက်များလာခဲ့ပြီးဘယ်ဘက်နှင့်ညာဘက် Doodles ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အခြားအရောနှောများထုတ်လုပ်ခဲ့လျှင်, သူတို့ရဲ့ခဲ့ကြသည် အရွယ်အစားမူကွဲ ။
ဤသည် doggo အဆိုပါ paw ကမ်ဘာပျေါတှငျအတော်လေးအသစ်ကထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်, အများဆုံးရောနှောဝတ်ရည်နှင့်အမျှသူတို့ဘယ်လိုစတင်သောအခါနှင့်မည်သို့သတင်းအချက်အလက်အများကြီးရှိပါတယ်မဟုတ်ပါဘူး။ သို့သော်duringစတြေးလျမျိုးဆက်တစ်ခုသည် ၁၉၈၈ ခုနှစ်အတွင်းပထမဆုံး Miniature Labradoodle ကိုထုတ်လုပ်ရန်သီအိုရီတစ်ခုရှိသည်။
ဤစပ်မျိုး၏ရည်မှန်းချက်မှာအနံ့မရှိသော၊ အနိမ့်ကျနေသောကုတ်အင်္ကျီရှိနေစဉ်ပိုင်ရှင်များအတွက်အထူးသဖြင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေမည့်ခွေးတစ်ကောင်ကိုဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်။ အခုတော့ Mini Labradoodles တွေပါ တစ် All- န်းကျင်ဖောက် ။
အသိအမှတ်ပြုမှုအဘို့, လူကြိုက်များစံ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်သင်ကသေးသေးလေး Labrador-Poodle ရောစပ်မှုဟာ American Kennel Club (AKC) ကအသိအမှတ်ပြုခံရတာကိုသင်သိချင်ရင်၊ သူတို့ကမဟုတ်ဘူး။ The အမေရိက၏ခွေး Registry, Inc ဒီ DRite Labradoodle အပါအ ၀ င်မျိုးပွားခြင်းအများစုကိုအသိအမှတ်ပြုသည်။
ဒီပေါင်းစပ်မျိုးကွဲထိပ်တန်းခွေးတစ်ကောင်အသင်းအဖွဲ့များ၏စင်ကြယ်သောတန်းစီဇယား၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမဟုတ်သော်လည်း၎င်း၏မိဘများပါ! ဒီတော့ Labrador Retriever နဲ့ Poodle တို့ကသူတို့ရဲ့မျိုးစပ်အမျိုးအနွယ်ကိုအမွေဆက်ခံနိုင်တဲ့အရည်အသွေးတွေကိုကြည့်ရအောင်။
Labrador Retriever: မိသားစုအကြိုက်ဆုံးတစ်ခု
endearingly အဖြစ်အမည်ပြောင် ဓာတ်ခွဲခန်း , အလုပ်လက်မဲ့ တစ်ချိန်ကကိုခေါ်ခဲ့ကြသည် ပြောင်နယူးဖောင်လန်ခွေး သို့မဟုတ် စိန့်ဂျွန်ရဲ့ခွေး သူတို့အစပြုဘယ်မှာအပေါ်အခြေခံပြီးခဲ့ကြသည်။ သူတို့ကအစပိုင်းတွင်ရပ်ကြီးခဲ့သည် ဂိမ်းပြန်လည်ရယူရန် မုဆိုးများ၏နှင့်နောက်ဆုံးမှာစုံလင်ခြင်းငှါတီထွင်ခဲ့ကြသည် gundog ။
ဓာတ်ခွဲခန်းများဖြစ်ကြသည် နေဆဲအမဲများအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည် , ဒါပေမယ့်သူတို့ကလေ့အဖြစ်ရှုမြင်ပါတယ် မိသားစုအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောကဲ့သို့သောအလုပ်မျိုးစုံတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်သည် ဝန်ဆောင်မှုခွေး ။ သူတို့ဟာ ၁၉၁၇ မှာ AKC ကအသိအမှတ်ပြုခံရပြီးတရားဝင်အသင်းဝင်ဖြစ်လာခဲ့သည် အားကစားအုပ်စု ။
ဤ Retriever အမျိုးအစားသည်အလတ်စားမှအကြီးစားမျိုးနွယ်ဖြစ်ပြီးအမြင့် ၂၂ မှ ၂၄ လက်မ (၅၇ မှ ၆၂ စင်တီမီတာ) နှင့်အလေးချိန် ၅၅ မှ ၇၉ ပေါင် (၂၅ မှ ၃၆ ကီလိုဂရမ်) ရှိပြီးအမျိုးသမီးများသည်အနည်းငယ်နည်းသောနေရာများဖြစ်သည်။ ယောက်ျားထက်။
Labrador Retrievers လည်းဆွဲဆောင်မှုခွေးတစ်ကောင်ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကဒီအားကစားခွေးနှင့်တစ်ရှိသည် ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်သည့်အလွှာနှစ်လွှာရှိသည် အနက်ရောင်၊ အဝါရောင်ဒါမှမဟုတ်ချောကလက်တွေဖြစ်နိုင်တယ်။ သူတို့၏သန့်ရှင်းသော ဦး ခေါင်း၊ ကျယ်သော ဦး ခေါင်းခွံနှင့်အစွမ်းထက်မေးရိုးများသည်ခြိမ်းခြောက်နေပေမည် စကား မင်္ဂလာပါ မျက်လုံးလေး ။ သူတို့ရဲ့ ကောင်းသောစိတ်ထားနှင့်ထောက်လှမ်းရေး ၎င်း၏ထိပ်တန်းထစ်စရိုက်များအထိထည့်ပါ။
Poodles ကိုအခြားမျိုးပွားများနှင့်ရောနှောရန်ရွေးချယ်ရသည့်အတွက်အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။ သူတို့ကအနိမ့်သွန်းရဲ့တော်တော်လေးကောက်သောဆံပင်ရှိသည်, သို့မဟုတ်အချို့ထည့်သွင်းစဉ်းစား hypoallergenic , သူတို့သည်တစ် ဦး ပါပဲ အများဆုံးအသိဉာဏ်ခွေး ကမ္ဘာပေါ်မှာ!
ဤရွေ့ကားစမတ် Poos လည်းအားကစားနှင့်စွယ်စုံဖြစ်ကြသည်။ စိတ်ထား၏စည်းကမ်းချက်များ၌, သူတို့ကအရမ်းသစ္စာစောင့်သိကစားခြင်း, ဒါပေမယ့်သူတို့လည်းနည်းနည်းမြင့်မားသော strung နှင့်အလွန်အထိခိုက်မခံနိုင်ပါတယ်။
အရွယ်အစားအဘို့, Poodles လာကြ၏ မျိုးကွဲသုံးမျိုး သို့မဟုတ်အရွယ်အစားမူကွဲ: Standard, Mini နဲ့ Toy ။
ရဲ့ Mini နှင့် Toy Poodle ကိုအာရုံစိုက်ကြပါစို့ သူတို့နှစ် ဦး စလုံးသည်သေးသေးလေး Labradoodle ထုတ်လုပ်ရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။
TO သို့ Mini Poodle ၁၁ လက်မမှ ၁၅ လက်မ (၂၈ မှ ၃၈ စင်တီမီတာ) ခန့်ရှိပြီး ၁၅ မှ ၁၇ ပေါင် (၇ မှ ၈ ကီလိုဂရမ်) အထိရှိသည်။ Toy Poodles သေးငယ်ပြီး ၁၀ လက်မ (၂၅ စင်တီမီတာ) နှင့်အလေးချိန် ၆ မှ ၉ ပေါင် (၃ မှ ၄ ကီလိုဂရမ်) အထိသာရောက်ရှိနိုင်သည်။
အရွယ်အစားမည်မျှပင်ရှိပါစေ Poodles သည်သူတို့၏အင်္ကျီနှင့်မတူထူးခြားသည့်အသွင်အပြင်ရှိသည်။ သူတို့ကနားရွက်များနှင့်ရှည်လျားသောနှာခေါင်းအပြင်ကျစ်လျစ်။ သက်တောင့်သက်သာဖြင့်သွားလာစေသည့်လှပသောပုံပန်းသဏ္asာန်ရှိသည်။
ဤမိဘနှစ်မျိုးစပ်ကြားထူးခြားသောလက္ခဏာများဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သည် အံ့သြဖွယ်ရလဒ်တစ်ခုမျှော်လင့်ထား သူတို့ရဲ့ရောနှောဖောက် pup သည်။
သေးငယ်သော Labrador နှင့် Poodle လက်ဝါးကပ်တိုင်သည်မိဘတစ် ဦး မှတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အပေါ်တွင်မူတည်သည်ကိုအမွေခံရနိုင်သည်။ သူတို့ရဲ့ကိုက်ညီမှု 50/50 မဟုတ်ရင်တောင်မှ, ဒီ cutie ထံမှမျှော်လင့်ထားနိုင်သည့်စရိုက်များအချို့ရှိပါသည်။
ယေဘုယျအားဖြင့် Mini Labradoodles တွင်ရှိသည် ခေါင်းပတ်ပတ်လည် နှင့်အတူ အလတ်စားနှာခေါင်း နှင့်သူတို့၏ floppy နားရွက် အောက်ခြေ rounded ပါပြီ။
သူတို့ရဲ့တကယ့်ကိုပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းတဲ့မျက်လုံးတွေကဖြစ်စေနိုင်ပါတယ် အညိုရောင်သို့မဟုတ် Hazel , ဒါပေမယ့်ကုတ်အင်္ကျီအရောင် merle သည်အမှုကိစ္စများအတွက် Mini ကို Labradorpoos အပြာရောင်မျက်လုံးရှိနိုင်ပါသည်, ဒါမှမဟုတ်တစ် ဦး မျက်လုံးတစ် ဦး သည်အခြားအနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်ရှိပါတယ်။
ဒီဒီဇိုင်နာမျိုးနွယ်ဟာပတ် ၀ န်းကျင်မှာအကောင်းဆုံးဝက်ဝံခွေးတစ်ကောင်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့သင့်ကိုယုံကြည်စေနိုင်သည့်သေးငယ်သော Labradoodle ခွေးကလေးလီလီ၏ဗီဒီယိုတစ်ခုဖြစ်သည်။
Mini Labradoodle ရဲ့အရွယ်အစားကဘာလဲ။
Labrador Retriever နှင့် Miniature Poodle တို့အကြားအမြင့်နှင့်အလေးချိန်ကွာခြားမှုကြောင့်သူတို့၏မျိုးစပ်အမျိုးအနွယ်၏အရွယ်အစားသည်လည်းကွဲပြားလိမ့်မည်။ Mini Labradoodle မှာအမြင့်ရှိတယ် 14 မှ 16 လက်မ (၃၆ မှ ၄၁ စင်တီမီတာ) နှင့်အလေးချိန်ရှိသည် 15 25 ပေါင် (7 မှ 11 ကီလိုဂရမ်) ။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းတို့၏ပျှမ်းမျှအရွယ်အစားကို Standard Labradoodle နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်၎င်းတို့သည် ၂၁ မှ ၂၄ လက်မ (၅၃ မှ ၆၁ စင်တီမီတာ) ခန့်ရှိပြီး ၆၅ ပေါင် (၂၉ ကီလိုဂရမ်) အထိအလေးချိန်ရှိခြင်းကြောင့်၎င်းတို့သည်သိသိသာသာကြီးသည်။
Mini Labradoodles သည်ခွေးအတိုင်းအတာ၏သေးငယ်သည့်ဘက်တွင်ရှိနေသောကြောင့်၎င်းတို့သည်၎င်းတို့ဖြစ်သည် အိမ်အမျိုးအစားအားလုံးတွင်နေထိုင်ရန်သင့်တော်သည် ပင်တိုက်ခန်းများ!
သင်စဉ်းစားမိလျှင် Miniature Labradoodle ဖြစ်လာသည် အပြည့်အဝ 13 လ၏အသက်အရွယ်အားဖြင့်စိုက်ပျိုး ။
ဒီဖောက်ရဲ့အရွယ်အစားကိုထိခိုက်စေနိုင်သောနောက်ထပ်အချက်တစ်ချက်က၎င်း၏နွယ်သို့မဟုတ်မျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်။ Doodles နှင့်သက်ဆိုင်သောအသုံးအနှုန်းများမှာ F1, F1b, F2 စသဖြင့်ဖြစ်သည်။
F1 သို့မဟုတ်ပထမမျိုးဆက် သေးငယ်သော Labradoodles သည် Labrador Retriever နှင့် Miniature Poodle တို့ကိုမိတ်ဆက်ပေးသောကလေးများ၏အမှိုက်သရိုက်များဖြစ်သည်။
ထိုမှတစ်ဆင့်မျိုးဆက်များအနေဖြင့်အဆိုပါ F1 ခွေးငယ်များသည်အခြားသေးငယ်သော Poodle နှင့်ပူးပေါင်းမည်၊ သို့မဟုတ်အင်္ကျီကဲ့သို့ Poodle စရိုက်များကိုပိုမိုတိုးတက်စေရန်အတွက် F1 ခွေးငယ်များနှင့်ပူးပေါင်းမည်လားဆိုသည်ကိုလေ့လာသည်။ ဒီဖြစ်စဉ်ကိုထုတ်လုပ်အမှိုက်သရိုက်များဟုခေါ်သည် F1b သို့မဟုတ်နောက်ကျောလက်ဝါးကပ်တိုင် ။ အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကို 'multigens' မှဆက်လက်နိုင်ပါတယ် သြစတြေးလျ Labradoodles ။
ဒီမှာပါ မျိုးဆက်များ၏စေ့စေ့စပ်စပ်ရှင်းပြချက် Doodles နှင့်အခြား hybrids များတွင်မိသားစုပင်သို့မဟုတ်နွယ်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုပုံများပြသပါ။
သေးသေးလေး Poodle နှင့် Labrador ရောနှောထားသော Coat & Colour
အင်္ကျီတွေအကြောင်းပြောရင်ဒီ doggo ရဲ့သားမွေးထဲဝင်လာနိုင်တယ် သုံးဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ ။ နှင့်အတူသူများ shaggy သို့မဟုတ်လှိုင်းတံပိုးအင်္ကျီ သူတို့ကိုပိုမို Labrador ရှိသည်, ဒါပေမယ့်သူကများသောအားဖြင့် Non- သွန်းလောင်းရန်နိမ့်သည်။
သူတို့က Poodle ရဲ့ဆံပင်ကိုအမွေဆက်ခံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရလိမ့်မယ် ကောက်သောသော့ ။ ဒါဟာတင်းကျပ်စွာထံမှတစ် ဦး လျော့ရဲရဲစည်ဆံပင်ကောက်ကောက်အထိအထိနိုင်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့်ဒီအမျိုးအစားဟာမသွန်းလောင်းပါဘူး။
ဒီ Doodle ရှိကောင်းရှိနိုင်သည့်အင်္ကျီများအနက်မှရှားပါးသည် ဖြောင့်သောအင်္ကျီ ။ ဒီတစ်ခုကချစ်စရာကောင်းတဲ့ဝက်ဝံရုပ်ကိုကြည့်မပေးပါဘူး သူတို့ကသူတို့ရဲ့ Lab ကမိဘနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အနိမ့်သွန်းလောင်းစဉ်းစားပါတယ်။
Mini Labbido များသည်အရောင်အသွေးစုံလင်လှသည်။ သူတို့ကိုအနက်ရောင်၊ ခရင်မ်၊ apricot (ရွှေဟုလည်းလူသိများသော)၊ caramel, ချောကလက်၊ အနီရောင်၊ ငွေ၊ လာဗင်ဒါ၊
သတိပြုပါ ဒီအရုပ်တွေကခြောက်ပတ်ပတ်လည်မှာအသက် ၂ နှစ်အထိအရောင်ပြောင်းနေတုန်းပဲ ။ ဥပမာအားဖြင့်နို့ချောကလက် Mini Labradordoodle သည်ဖြူသောဖြူသောဆံပင်အနည်းငယ်ကိုစတင်ရရှိနိုင်သည်။
Mini Labradoodles တွင်မိဘများကဲ့သို့ချစ်စရာကောင်းသောမျက်လုံးများရှိသည်။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့ကြောင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုခွေးဖြစ်ကြသည် ဖော်ရွေ နှင့် လူများကြိုက်နှစ်သက်သည် ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး။
ဒီလူပေါင်းကောင်းသော pooch အလွန်သစ္စာစောင့်သိသည်နှင့်တစ် ဦး ဖြစ်ခြင်းမခက်ခဲပါလိမ့်မယ် မိသားစုခွေးကောင်း ကလေးများနှင့်အခြားအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များပတ်ပတ်လည်ရှိအခါတိုင်း။
Mini Labradoodles ဟောင်နေသလား။
ယေဘုယျအား, Labrador-Poodle ရောနှောအေးဆေးတည်ငြိမ်ငြိမ်းချမ်းသောခွေးတစ်ကောင်ဖြစ်ပါသည်, သူတို့သည်ရန်လိုဖြစ်လေ့မရှိပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤဖောက်ခွဲမှု၏လက်ရှိပိုင်ရှင်အချို့သည်အလွန်များပြားသောအခေါက်များဖြစ်ကြောင်းသေချာပါသည်။
အခြားလူများ၊ ခွေးများသို့မဟုတ်တိရိစ္ဆာန်များကိုသူတို့၏အိမ်အပြင်ဘက်တွင်တွေ့သည့်အခါတိုင်းဤမလိုလားအပ်သောအပြုအမူများမကြာခဏဖြစ်တတ်သည်။ သင်aည့်သည်လာသည့်အခါတိုင်းသူတို့သည်ဟောင်နိုင်သည်။
Mini Labradoodles ကဘာလို့လဲဆိုတော့စိတ်မပူပါနဲ့ မြင့်မားသောအသိဉာဏ် crossbreed, ဆိုလိုသည်မှာသင်၏ခြေလေးချောင်းရှိသောသူငယ်ချင်းကိုလေ့ကျင့်ရာတွင်မည်သည့်ပြproblemsနာမျှမရှိသင့်ပါ။
မည်သည့်ခွေးတစ်ကောင်, ဒီ fido လိုပဲ လေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်းနှင့်ခွေးပေါက်စအဖြစ် socialized အခါအကောင်းဆုံးပြုလိမ့်မည် ။
Mini Labradoodles မှာရှိတယ် စွမ်းအင်တန်ချိန် နှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာပြproblemsနာများကိုအနည်ထိုင်ရန်သင်ဤအားသာချက်ကိုအသုံးပြုရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
သင်ကအပြေးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင် 5K လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းမှာသင်နဲ့အတူနေပါ။ သူတို့ကအစကောင်းတယ် ရေကူး သင့်ရဲ့ခွေးခြေချောင်းသည်သူ၏ Poodle မိဘများကဲ့သို့ webbing ပြီအထူးသဖြင့်လျှင်။
သင်၏လူမှုရေးလိပ်ပြာဖြစ်ခြင်းသည်သင်၏ Miniature Labradorpoo သည်ခွဲခြာစိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
အချို့သည်သူတို့၏လူ့ထံမှခွဲခြားရန်လေ့ကျင့်ခံရရန်သင်ကြားခံရနိုင်သည်၊ သို့သော်တစ်စုံတစ် ဦး သည်အမြဲတမ်းအိမ်ပြန်ရောက်နေသည့်အိမ်များအတွက်၎င်းတို့သည် ပို၍ သင့်တော်သည်။
ဤသည်ဒီဇိုင်နာခွေးကျစ်လစ်သိပ်သည်းဖြစ်နှင့်နေရာအများကြီးမလိုအပ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်ပျော်စရာနှင့်စွမ်းအင်နှင့်ပြည့်စုံသားမွေးဘောလုံးအစွန်အဖျား - ထိပ်တန်းပုံသဏ္ဌာန်၌နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ဝက်ဝံရုပ်သေးသေးလေး Labradoodle ကိုခင်းခြင်း
ဒီ pooch တစ် ဦး ပေးရအထွေထွေစည်းမျဉ်းပါပဲ တိုင်း4မှ6ပတ်တိုင်းရေချိုး နှင့် တစ်ပါတ်နှစ်ကြိမ်၎င်း၏သားမွေးတိုက် ။ သို့သော်၎င်းသည်သင်၏ Mini Poodle & Labrador ရောနှောထားသောအဝတ်အစားအမျိုးအစားနှင့်သူမအိမ်ပြင်တွင်နေထိုင်သည့်အချိန်ပမာဏပေါ်မူတည်နေဆဲဖြစ်သည်။
Miniature Labradoodle ကိုနေ့စဉ်သန့်ရှင်းရေးလုပ်လိုသူများအနေဖြင့်သူမသည်ဗိုက်၊ အမြီးအောက်နှင့် Bum တို့ကိုအထူးဂရုပြုနေစဉ်ဘက်စုံသုံးခွေးတစ်ကောင်သန့်ရှင်းရေးကိုသုတ်နိုင်သည်။
ပိုင်ရှင်အချို့သည်သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ရန်သူတို့၏ Doodle ကိုလစဉ်ဆောင်ယူသူများထံယူဆောင်လာကြသည်။ သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်၏လက်သည်းများကိုချုံ့ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ယုံကြည်မှုရှိပြီးအတွေ့အကြုံရှိပါကခြောက်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ပါ။
နားသန့်ရှင်းရေးနှင့်ဆွတ် Poodle ရောသမမွှေများအတွက်လိုအပ်သည်။ ဘာကြောင့်နှင့်မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုရှင်းပြသည့်ဗွီဒီယိုတစ်ခုဖြစ်သည်။
သေးငယ်သော Labradoodle သည်မည်မျှစားသင့်သနည်း။
Mini Labradoodle လိုအပ်သောကြောင့်သင်၏ Doodle မည်မျှသေးငယ်သည်ကိုမယုံပါနှင့် 1.5 ခွက်မှ2ခွက် အရည်အသွေးမြင့်ခြောက်သွေ့သော kibbles ၏ အလတ်စားမှအသေးစားမှသေးသေးလေးအဘို့အရေးဆွဲ ။ အကယ်၍ မင်းကသူရဲ့နေ့စဉ်ကယ်လိုရီလိုအပ်ချက်အပေါ် မူတည်၍ သင့်ကလေးကိုအစာကျွေးလိုလျှင်၊ ဒီမှာဘယ်လို ဒါကိုတွက်လို့ရပါတယ် ဒါပေမယ့်ဒီနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုပြီးတဲ့ကယ်လိုရီဂဏန်းတွက်စက်ကိုသာလိုအပ်တဲ့သူများအတွက်တော့သွားပါ ဒီမှာ ။
ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးသောအစားအစာအမျိုးအစားနှင့်ပမာဏသည်သူတို့၏အသက်၊ အရွယ်၊ လှုပ်ရှားမှုအဆင့်နှင့်၎င်းတို့၏ကျန်းမာရေးအပေါ်တွင်မူတည်သည်။
သင်၏ Teddy ဝက်ဝံခွေးကို Labrador မိဘများကအလွန်အကျွံစားသောက်သောသူအဖြစ်လူသိများသောကြောင့်အစာမကျွေးပါနှင့်။ သူမ၏ပေးစမ်းပါ2မှ4အစားအစာများ တစ်နေ့တာလုံး။ မင်းရဲ့ Miniature Poodle-Labrador Retriever ရောစပ်မှုမြန်လျှင်စားမယ်ဆိုရင်သင်သုံးနိုင်သည် အပြန်အလှန်အစာကျွေး သူမ၏နှေးကွေးစေရန်အဖြစ်သူမ၏အားရစရာပေးတဲ့အခါ။
Mini Labradoodle ၏လေ့ကျင့်ခန်းလိုအပ်ချက်
ဤသည် crossbreed အနည်းဆုံးလိုအပ်သည် တစ်နာရီမှမိနစ် 30 တစ်နေ့လေ့ကျင့်ခန်း၏။ နှစ်လမ်းလျှောက်ခြင်း အဆိုပါရပ်ကွက်အတွင်းန်းကျင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွဘို့သင့်ရဲ့ fido ရဲ့လိုအပ်ချက်ကျေနပ်အောင်ဖို့လုံလောက်တဲ့ပါလိမ့်မယ်။
ရာသီဥတုကြောင့်ပြင်ပသို့ထွက်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါကသို့မဟုတ်သင်အိမ်ပတ် ၀ န်းကျင်အိမ်မှုကိစ္စများနှင့်အလုပ်များနေပါကဂန္ထဝင်ကစားနည်းသည်သင့်အားကျရှုံးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ မင်းရဲ့ပင့်ကူကိုကျယ်ဝန်းတဲ့အိမ်နောက်ဖေးမှာထုတ်ပြီးသူမအကြိုက်ဆုံးဘောလုံးကိုပတ်ပတ်လည်မှာလိုက်ပို့ပါစေ။
playdates သို့မဟုတ် doggy ပန်းခြံသို့သွားခြင်းသည်သင်၏ Mini Labbidoo ကိုပျော်ရွှင်စေလိမ့်မည်။
Mini Labradoodles များသည်ယေဘုယျအားဖြင့်ကျန်းမာပြီးပျမ်းမျှသက်တမ်းရှိသည် ၁၀ နှစ်နှင့် ၁၅ နှစ်။
ရောနှောထားသောမျိုးစိတ်များကြောင့်၎င်းတို့၏ပေါက်ဖွားသောမိဘများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုကျန်းမာသန်စွမ်းသည်ဟုလူသိများကြသည် မျိုးစပ်သန်စွမ်း သင်၏သေးသေးလေး Labradoodle သည်မျိုးရိုးဗီဇရောဂါများကိုအမွေဆက်ခံရန်ဖြစ်နိုင်သည်။
Labrador Retrievers နှင့် Poodles တို့၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေအချို့သည်သူတို့၏သားစဉ်မြေးဆက်များသို့လက်ဆင့်ကမ်းပေးနိုင်သည့် Progressive Retinal Atrophy (PRA)၊ ဖောင်းပွ၊ တင်ပါးနှင့်တံတောင်ဆစ်ခွဲစိတ်မှု၊ ကုရှန်ရောဂါ အက်ဒစ်ဆင်ရဲ့ရောဂါ၊ နာတာရှည် Active Hepatitis နှင့် လေ့ကျင့်ခန်း - သွေးဆောင်မှုပြိုကျခြင်း (EIC) ။
အကယ်၍ သင်က Mini Labradoodle ခွေးကလေးကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားလျှင်၊ ဤအခြေအနေများနှင့်သူတို့၏လက္ခဏာများကိုနားလည်ရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်ပိုင်ရှင်တွေကသူတို့ရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးကိုရဖို့ကူညီပေးတယ်။
Mini Labradoodle ခွေးတွေမှာပျမ်းမျှစျေးနှုန်းရှိပါတယ် $ 500 မှ $ 2500 ။ ထိုကဲ့သို့သောအမှိုက်သရိုက်များအရွယ်အစားကဲ့သို့သောအချက်များကြောင့်ကုန်ကျစရိတ်များထိခိုက်သည် ပျမ်းမျှ 8 pups ဒီဖောက်မှုအတွက်, သွေးကြောသို့မဟုတ် pedigree, လူကြိုက်များနှင့်မျိုးဆက်များ၏တည်နေရာ။
အလွန်စျေးကြီးသောသို့မဟုတ်စျေးပေါခွေးကလေးက၎င်း၏အရည်အသွေးကိုအာမခံမထားဘူးဆိုတာသတိရပါ။ ထို့ကြောင့်မျိုးဆက်များနှင့်အလားအလာရှိသော ၀ ယ်သူများအကြားစစ်ဆေးခြင်းသို့မဟုတ်မေးခွန်းများသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
သင့်ခွေးကလေးကိုသူတို့၏ငွေပေးချေမှုကိုသာရောင်းလိုသူများကိုသတိထားပါ။ ရှိပါတယ် ကျန်းမာရေးနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိုးရိမ်မှုများ နှလုံးမှာခွေး '' အကောင်းဆုံးအကျိုးစီးပွားမပါဘဲဒီဇိုင်နာခွေးမွေးမြူရေးအကြောင်းကိုထမြောက်တော်မူ။ ခွေးပေါက်စများနှင့်တာဝန်မဲ့သောမျိုးဆက်များသည်အမြတ်အစွန်းအတွက်ကျန်းမာရေးနှင့်မညီညွတ်သည့်ခွေးများကိုမွေးမြူခြင်းဖြင့်အန္တရာယ်ဖြစ်စေသည်။
အရေးကြီးသောမေးခွန်းများမေးခြင်းအပြင် လည်ပတ်ရန်တောင်းဆိုသည် မိဘများနှင့်သူမ၏အမှိုက်သရိုက်များနှင့်တွေ့ဆုံရန်ခွေးပေါက်စ။
ဒါဟာအစဖို့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အခွင့်အလမ်းပါပဲ စောင့်ကြည့်ပါ သူတို့ကောင်းစွာဂရုစိုက်ခံရပြီးသူတို့လက်ရှိပိုင်ရှင်နှင့်သူစိမ်းများကိုတွေ့သောအခါသူတို့မည်သို့တုံ့ပြန်သည်ကိုသိရန်ခွေး၏ပတ်ဝန်းကျင်ကိုသိရန်။
သငျသညျရှိနေစဉ်, မေးပါ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများကိုကြည့်ပါ အဆိုပါ pups ၏မိဘများ၏။ ခလေးများတွင်အနည်းငယ်ရိုက်ချက်များရှိပြီး vet မှတ်တမ်းများရှိပါကဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိမျိုးပွားသူသည်သင်အားထိုအရာကိုကြိုတင်ပြသလိမ့်မည်။
သေးငယ်သော Labradoodle မျိုးဆက်များ & ခွေးများ
သင်၏ကိုယ်ပိုင် Mini Labradordoodle ခွေးကလေးကိုစတင်ရှာဖွေရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား။ သတင်းကောင်း! ဒီမျိုးဆက်များရှိနိုင်သောမျိုးဆက်များကိုသင်ရှာဖွေရန်မလိုအပ်တော့ပါ။ နည်းပညာမှကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ တိကျသောမျိုးပွားများနှင့်ရောနှောခြင်းများအတွက် kennel တစ်ခုကိုလွယ်လွယ်ကူကူရှာနိုင်သည်။
သေးငယ်သော Labradoodle ခွေးပေါက်စများကိုရောင်းချသောဤဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုကြည့်ပါ။ သူတို့ကတောင်ဖြစ်နိုင်တယ် သင့်ရဲ့ရိယာအနီး ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်၎င်းတို့ထံမှသင်ဝယ်ယူပါက၎င်းတို့ကိုစစ်ဆေးရန်နှင့်သင့်ကလေးအားခေါ်ယူရန်လွယ်ကူလိမ့်မည်။
Mini ကို Labradoodle ခွေးပေါက်စ (Greenville, SC)
ဤရွေ့ကားစျေးကွက်များကဲ့သို့လည်းထွက်စစ်ဆေးနေရကျိုးနပ်ဖြစ်ကြသည် Greenfield ခွေးပေါက်စ နှင့် Lancaster ခွေးပေါက်စ ။
Mini Labradoodles ကိုကယ်တင်ရန်သို့မဟုတ်မွေးစားရန်
ခွေးတစ်ကောင်သို့မဟုတ်ခွေးတစ်ကောင်ကိုမွေးစားခြင်းသည်သင်၏အိတ်ကပ်ထဲ၌သူတို့ကုန်ကျစရိတ်များသောအားဖြင့်အများကြီးပိုလွယ်သည် ဒေါ်လာ ၃၀၀ ဝန်းကျင် ။ အမိုးအကာတွင်သူတို့နေစဉ်အတွင်းခွေးသည်ကာကွယ်ဆေးနှင့်စောင့်ရှောက်မှုပမာဏကိုများသောအားဖြင့်ပမာဏသည်မကြာခဏဖုံးလွှမ်းထားသည်။ သူတို့ထဲကတချို့ဟာသူတို့အဲဒီမှာရှိနေတုန်းပဲလေ့ကျင့်ခံခဲ့ရတယ်!
အကယ်၍ သင်သည်သားမွေးကောင်းကင်တမန်ကိုတစ်ခါမှမကယ်တင်ဖူးပါကသူတို့၏နောက်ခံသည်သူတို့၏မိဘများကဲ့သို့အမြဲတမ်းမသိသောအရာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသင်သိသင့်သည်။ တခါတရံမှာပင်သူတို့ရဲ့တိကျတဲ့ဖောက်ရောနှော!
မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆိုခွေးတစ်ကောင်ကိုကယ်တင်ရန်သို့မဟုတ်မွေးစားရန်မှာထိုသို့သောမြင့်မြတ်သောအရာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ထိုဆင်းရဲသောခွေးတစ်ကောင်အားမိသားစုဘ ၀ တွင်ချစ်မြတ်နိုးရန်နှင့်အသက်တာတွင်နောက်ထပ်အခွင့်အရေးတစ်ခုပေးလိမ့်မည်။
Goldendoodle နှင့် Labradoodle ကယ်ဆယ်ရေး (Reinholds, PA)
Doodle ကယ်ဆယ်ရေးကုမ္ပဏီ (Warwick, RI)
Doodle ရော့ခ်ကယ်ဆယ်ရေး (Dallas, TX)
Mini Labradoodles က စိတ်ကူးယဉ်ခွေး မိသားစုထဲမှာရှိသည်။ သင်၊ သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်သို့မဟုတ်သင့်ကလေးတွေဖြစ်ပါက၎င်းတို့သည်အထူးသဖြင့်ထူးခြားသောအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များဖြစ်သည် တက်ကြွ နှင့်သူတို့၏ခန္ဓာကိုယ်နှင့်စိတ်ကိုထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ရရှိနိုင်ပါ။
ဤရွေ့ကား Non- သွန်းလောင်းရန်အနိမ့် Doodles သည်အရသာအမျိုးမျိုးနှင့်သားမွေးအမျိုးအစားများဖြင့်သင်တို့၏အရသာနှင့်ကိုက်ညီသည်။ သူတို့ကအစပါပဲ သစ္စာစောင့်သိ, မယုံနိုင်လောက်အောင်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောနှင့်ပြင်းစွာသောစမတ် ။
သင်ဘယ်လိုထင်ပါလဲ? မင်းအိမ်ကိုယူလာပြီလား ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုရှိပါသလား။ ငါ့ကိုမှတ်ချက်များအတွက်သိပါစေ။
teacup chihuahua တစ်ခွက်ဘယ်လောက်လဲ
အမျိုးသားများအတွက်အပြာရောင်နှာခေါင်းပေါက် pitbull အမည်များ
ဂျာမန်သိုးထိန်းဓာတ်ခွဲခန်း retriever ရောနှော
alaskan klee kai ခွေးပေါက်တွေဘယ်လောက်လဲ